Sida loogu wareejiyo xogtaada caafimaad iPhone cusub | Wararka IPhone
Sida loogu wareejiyo xogtaada caafimaad iPhone cusub adigoon dib u soo celin
Kaydinta macruufka way fiicantahay laakiin ... Kawaran haddii waxa kaliya ee aan dooneyno inaan u wareejino aaladdeenna cusub ay tahay xog caafimaad iyada oo aan lasoo celin keyd?, xalku wuu ka fudud yahay sida loo dhawaaqo. Markii aan helno iPhone cusub waxaan inta badan jecel nahay inaan ka bilowno xoq, adigoon rakibin nuqullo nuqul ah, si aan ugu raaxeysanno khibrada macruufka sida ugu nadiifsan uguna xasilloon, sida aan u soo jiidaneyno dhibaatooyinkii hore ama si fudud maxaa yeelay waxaan dooneynaa inaan ku xirno qalabkeenna cusub inta aan ka shaqeyneyno nidaamka oo dhan oo kala soo bixi barnaamijyadeenna. Si kastaba ha noqotee, mahadsanid barnaamij cusub waxaan awoodi doonnaa inaan u wareejino macluumaadkeena Caafimaadka adigoon isticmaalin nuqul nuqul ah iPhone-ka sidaa darteedna, adigoon jiidanayn xog aanan dooneyn, kaliya kuwan
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa Kalabixinta dhaqdhaqaaqa waana adeeg bilaash ah OS X iyo Windows, kaas oo noo ogolaanaya inaan ka soo saarno oo keliya xogta Caafimaadka iyo Waxqabadka keyd aan ku keydinay iTunes si qarsoodi ah si aan hadhow ugu darno dhammaan xogtaan aalad cusub oo iPhone ah iyadoo aan dhibaato kale la qabin . Fikradda ayaa ah inaan u adeegsan karno qalabka si aan ugu rakibno kaliya xogtaas, oo aan uga tagno inta ka hartay iPhone-keena cusub ama iPhone-ka oo dib loo soo celiyey gebi ahaanba nadiif ah. Si kastaba ha noqotee, tan waxaan ugu baahan doonnaa Apple Watch iyo keydkeeda, maadaama wareejinta xogtani ay aad uga faa'iido badan tahay kuwa isticmaala Apple Watch oo ay ku hayaan tiro aad u badan oo xog Caafimaad ah.
Kala soo bax barnaamijka este isku xirka
Kala-bax Apple Watch-kaaga (kaas oo abuuri doona keydinta xogtaada Caafimaadka).
Isku aad iPhone in iTunes iyo abuuro gurmad ah Windows XP.
Xir iTunes kadib markaad koobiyeeysid oo aad bilowdo barnaamijka aad soo dejiso
Guji sii wad wareejinta, xulo feylka aad rabto inaad wareejiso oo guji "decrypt".
Hadda arjiga caafimaadka ayaa leh xogta, sidaa darteed waxaad dib-u-laba-laabi kartaa Apple Watch-ka aad adigu ka dillaacday iPhone-kii hore.
Hadda waad ku raaxeysan kartaa dhammaan xogtaada Caafimaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loogu wareejiyo xogtaada caafimaad iPhone cusub adigoon dib u soo celin
Waxaan ahay laba maalmood waan soo daahay, ceeb, waxaan ku weydiiyay iyaga dukaanka Apple mana garaneynin sida loo sameeyo, horeyba waan u tirtiray dhammaan diiwaanada Apple Watch iyo kuwa kale. Weli aad baad ugu mahadsan tahay wax ku biirinta.
xamaam maryo dijo
Waa doqonimo mar labaad in Apple ay naga dhigeyso inaan u adeegsano noocyadan khiyaanooyinka caajiska ah halkii aan ka bixin lahayn xal fudud
Jawaab ku bixi Paloma Maria
Sida looga saaro shahaadooyinka xididka iPhone ama iPad
Beddit, kormeeraha hurdada ee aad raadineysay